iPhone X: သတင်းများ၊ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ အသွင်အပြင်များ၊ စျေးနှုန်းများနှင့်အခြားအရာများ! | အိုင်ဖုန်းသတင်းများ (စာမျက်နှာ ၂)
Apple က iPhone X, iPhone 6s နှင့် iPhone SE များကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်
Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် iPhone X, iPhone 6s နှင့် iPhone SE များကို၎င်း၏စာရင်းမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။
Apple ကဖန်သားပြင်အောက်မှာ fingerprint sensor ကိုအကောင်အထည်ဖော်မှာမဟုတ်ပါဘူး
Face ID ၏တင်ဆက်မှုသို့လအနည်းငယ်အတွင်း Apple နှင့် Samsung နှစ်မျိုးစလုံးပြproblemsနာများကြုံခဲ့ရသည်ဟူသောကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အက်ပဲလ်သည်မျက်နှာပြင်အောက်ရှိအာရုံခံကိရိယာကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်တော့မည်မဟုတ်။
ဒါက iPhone XS (တရားဝင်အက်ပဲလ်ဓာတ်ပုံ) ။
iPhoen XS အသစ်၏ဓာတ်ပုံများကိုတင်ဆက်ပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင်အရွယ်အစားနှစ်မျိုးနှင့်ရွှေရောင်အသစ်များကိုအတည်ပြုသည်
တရား ၀ င်တယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာအိုင်ဖုန်းအသစ်ကိုငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်
အက်ပဲလ်ကအိုင်ဖုန်းအသစ်တင်ဆက်သည့်ရက်ကိုစက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် (၇း၀၀) နာရီတွင်စပိန်နိုင်ငံနှင့်စတိဗ်ဂျော့စ်ပြဇာတ်ရုံမှပြုလုပ်ခဲ့သည်
DigiTimes က Apple သည် iPhone သစ်၏စီးရေ ၇၀ မှ ၇၅ သန်းကိုရောင်းချလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်
DigiTimes တွင်အသစ်စက်စက်ရောင်းချရမည့်ခန့်မှန်းခြေအရောင်းအဝယ်အခြေအနေများနှင့် ပတ်သတ်၍ အသစ်ထုတ်ပြန်ထားသောဒေတာများကိုသတိထားပါ။
iPhone အသစ်တွင်ကင်မရာတွင်တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည်။ နာမည်တွင်“ Plus” မပါရှိပါ
Mark Gurman ကစက်တင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့်လာမည့် Keynote တွင်မတူညီသောမျက်နှာပြင်များပါရှိသော iPhone အသစ်သုံးခုကို Apple မည်သို့တင်ပြနိုင်သည်ကိုအကြိုနိဒါန်းကြေငြာခဲ့သည်။
iPhone X သည်တစ်ပတ်ရစ်ရောင်းအားတွင်အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်စံချိန်တင်ခဲ့သည်
Apple က iPhone X ၏ Face ID ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်“ Memory” အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Cupertino မှလူငယ်များသည် Memory spot အသစ်နှင့်အတူ iPhone X ၏ Face ID ကိုမူလပုံစံအတိုင်းဆက်လက်မြှင့်တင်လိုကြသည်။
အိုင်အက်စ် X ၏ရေခံနိုင်မှုသည်မြစ်၌နှစ်ပတ်အတွင်းရေနစ်မြုပ်သည်
WWDC မတိုင်မီနာရီအနည်းငယ်အလိုတွင် Apple သည် Animoji Karaoke နှင့်အခြားနေရာတစ်ခုသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်
အက်ပဲလ်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစက်သည် WWDC ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမတိုင်မီနာရီအနည်းငယ်ကြာမြင့်လာသည်။
iPhone X ကင်မရာအားချိုးဖောက်သောသုံးစွဲသူအရေအတွက်တိုးပွားလာနေသည်
iPhone X နှင့်ပတ်သက်သောပထမဆုံးပြproblemsနာများသည်၎င်း၏နောက်ကင်မရာဖန်ခွက်ကိုကွဲစေသည့်ပြproblemsနာများစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။
Apple က iPhone X ၏ပုံတူ mode ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်ဗွီဒီယိုအသစ်ကိုထုတ်ဝေသည်
Apple X သည်အစောပိုင်းက iPhone X ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Portrait mode နှင့် "Portrait lighting" ဖြင့်ပြန်လည်ပတ်သည်
LG က LG G7 ရှိ iPhone X ၏ notch ကိုကူးယူခြင်းမပြုသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG က G7 အသစ်၏ဒီဇိုင်းသည် iPhone X ကိုမထုတ်လုပ်မီကြာမြင့်စွာကပင်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အမေဇုံက iPhone X ၏မျက်နှာပြင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် application ကို update လုပ်သည်
Amazon Echo smart devices များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် Alexa application ကိုနောက်ဆုံးပေါ် iPhone X ၏ notch ဖြင့် ၅.၈ လက်မဖန်သားပြင်သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။
Samsung က iPhone X ၏ပထမဆုံး "မိတ္တူကူးခြင်း" ကိုမူပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်
ကိုရီးယားနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးသည်၎င်း၏နောက်စမတ်ဖုန်းဖြစ်လာမည်ကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ iPhone X နှင့်ဆင်တူတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများပါတဲ့ terminal အသစ်တစ်ခုပါ။
မှောင်မိုက်သောအခင်းအကျင်းကို၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်လိုက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ် application များထဲမှတစ်ခုမှာတွစ်တာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင် application ကိုအလင်းရောင်နည်းသောအခါအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
iPhone 8 Plus နှင့် iPhone X တို့၏ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် Galaxy S9 အသစ်၏သက်တမ်းထက်သာလွန်သည်
ထပ်မံ၍ iPhone 8 Plus နှင့် iPhone X နှစ်ခုစလုံးသည် Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 + ထက်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
၅.၈ လက်မအရွယ် iPhone X ဆက်ခံသူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းစျေးသက်သာသည်
ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နိမ့်ခြင်းကြောင့်နောက်မျိုးဆက် iPhone X ဟာ ၁၀% စျေးသက်သာလိမ့်မယ်။
ရွှေ iPhone X ကိုဖြန့်ချိဖို့နီးကပ်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
iPhone နှင့်၎င်း၏အရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသောအခါ၎င်းသည်ကောလာဟလအမှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အိုင်ဖုန်း…
Apple သည်အောက်ပါ iPhone များအတွက် panel ပေါင်း ၂၇၀ ခန့်တောင်းဆိုသည်
iPhone X ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်အက်ပဲလ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ပြproblemsနာဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။
"တစ်ချက်ကြည့်လျှင်သော့ဖွင့်ပါ" သည် iPhone X အတွက်မြှင့်တင်ရေးဗွီဒီယိုအသစ်ဖြစ်သည်
Face ID အလုပ်လုပ်ပုံကို Apple က၎င်း၏ YouTube channel တွင်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုတင်ခဲ့သည်
Citi မှလေ့လာသုံးသပ်သူများက iPhone X အတွက်အဆိုးဆုံးရောင်းအားခန့်မှန်းချက်ကိုပေးသည်
အခုလူတိုင်းကကော်ပီကူးနေကြပြီဆိုရင် "notch" ဟာ 2019 iPhone မှာပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာပါ
ဘ ၀ ၏ Paradoxes များ၊ ဤမျှလောက်များစွာသောပြီးနောက် iPhone X ၏ဒီဇိုင်းအသစ်သည်စကားပြောရန်လိုသည်။
iPhone X, Apple Park နှင့်၎င်း၏ပြတင်းပေါက်များဆန့်ကျင်စွာရိုက်ခတ်ခြင်း အရာအားလုံး ...
ပြီးတော့ဒီဘ ၀ မှာအချိန်ကုန်ခံပြီးဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေဖို့နည်းလမ်းမရှိတော့ပါ။
iPhone X သည်ယခုနှစ် MWC တွင်ပေးအပ်ခဲ့သောဆုများကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်
ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် Mobile World Congress တွင်ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းဆုများချီးမြှင့်ခံရသည်။
ကောလာဟလအသစ်များအရ Samsung သည် iPhone X အတွက်ပြုလုပ်သော OLED ပြားအရေအတွက်ကိုလျှော့ချနေသည်ဟုဆိုကြသည်
ယခုလတွင် Bloomberg မှအစီရင်ခံစာအသစ်တစ်ခုအရ Samsung X သည် iPhone X အတွက် OLED ပြားထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချရန်ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
Apple X မှ iPhone X ကိုတင်ဆက်ပြီးနောက်ကျန်ထုတ်လုပ်သူများက၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များနှင့်အတူ notch ကိုအသုံးပြုမည်မသုံးသင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
Apple သည်စပွန်ဆာအဖြစ်Machineသရေလ Machine Vision Conference တွင်ပါဝင်မည်
Apple သည် Israel Machine Vision Conference တွင်ပြောမည်။ သူ၏ဟောပြောချက်သည် iPhone X ၏ရှေ့ကင်မရာနှင့်၎င်း၏နည်းပညာကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုအခြေခံလိမ့်မည်။
Samsung Galaxy S9, iPhone X, iPhone 8 နှင့် iPhone 8 Plus တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
Samsung Galaxy S9 တရား ၀ င်သည်နှင့်တပြိုင်နက်နှိုင်းယှဉ်ပြသခြင်းအားဖြင့် Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 + ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို iPhone X, iPhone 8 နှင့် iPhone 8 Plus နှင့်တွေ့နိုင်သည်။
ဤနည်းဖြင့် Apple X သည် 'Portrait Lighting' ၏လုပ်ဆောင်မှုကို iPhone X ၏အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်
အက်ပဲလ်က၎င်း၏ဗွီဒီယိုအသစ်ကို၎င်း၏ယူကျု့ချန်နယ်သို့ထည့်သည်။ ဒါ့အပြင်အသုံးပြုသူကို iPhone X ရဲ့ Portrait Lighting လုပ်ဆောင်ပုံကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
Nikkei မှပြောကြားခဲ့သည်မှာ iPhone X ဝယ်လိုအားနည်းခြင်းကြောင့် Samsung တွင် OLED ပြားများပိုများနေသည်
Nikkei Asian Review မှ iPhone X သည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းရောင်းချခြင်းမရှိဟုကောလာဟလများဖြင့်ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Samsung နှင့်၎င်း၏ OLED panel များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်
Apple မှ iPhone X ၏မော်ဒယ်သစ်များအား ၀ ယ်လိုအားကလွန်ခဲ့သောသုံးလတာကာလအတွင်းနှင့်ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်စဉ် iPhone X နှင့်ပြproblemsနာကြုံတွေ့ရသောသုံးစွဲသူအရေအတွက်တိုးပွားစေသည်
iPhone X ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြnewနာအသစ်ကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါအသုံးပြုသူကသူတို့ကိုမတုန့်ပြန်နိုင်အောင်တားဆီးပေးမယ့်မျက်နှာပြင်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
iOS 11.3 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသည်နောက်ဆုံးတွင် Face ID အသုံးပြုမှုကို Family function မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ယူမှုများအား ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Rio Carnival တွင် iPhone X ၏ပုံတူ mode အသစ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် Cupertino မှယောက်ျားများသည်တစ်ဖန်သတိပြုမိကြသည်။
Cupertino ယောက်ျားလေးများသည်ကျော်ကြားသော Animoji သရုပ်ဆောင်ထားသောကာရာအိုကေအစက်နှစ်ခုနှင့်အတူ Grammy Awards တွင်ကြယ်ပွင့်များကိုပြသသည်။
iPhone XI ၏ပထမဆုံးသောအယူအဆများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်
ပန်းသီးပေါ်ရှိနောက်ထပ်ဖုန်းကို iPhone XI ဟုခေါ်တွင်နိုင်ပြီး bezels နှင့် notch ကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်မျက်နှာပြင်တိုးလာသည့် SIM ကဒ်နှစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်း5အကောင်းဆုံး iPhone X အင်္ဂါရပ်များ
အကယ်၍ iPhone X သည်သင်ရှာနေသည့် terminal လားဆိုတာသေချာမသိသေးလျှင် iPhone X ၏အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ် ၅ ခုနှင့်မည်သည့်အရာများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသမည်။
Tim Cook သည် Steve Jobs ၏ခြေရာကိုနင်းပြီး Duke တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတွင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာမှာ Animoji ဖြစ်လာခြင်းအားဖြင့်ထိုကြေငြာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် iPhone X ၏ကြေငြာချက်သည်မိမိကိုယ်ကို selfies ယူရန်ရွေးချယ်စရာများကိုအာရုံစိုက်သည်
Apple ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ကြေငြာချက်မှာ iPhone X ရဲ့ selfie mode ကိုဆယ့်တစ်ခေါက်မြှင့်တင်ဖို့အတွက် Muhammad Ali ရဲ့နောက်ခံစကားတွေကိုကြားရတယ်။
ယခုနှစ်နောက်ဆုံးသုံးလပတ်အတွင်း iPhone 8 သည် iPhone X ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့သည်
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ iPhone 8 သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ iPhone X ထက်နှစ်ဆရောင်းချခဲ့ပြီးမော်ဒယ်အဟောင်းများမှာစျေးကောင်းနှုန်းဖြင့်ရောင်းနေကြသည်။
Apple က iPhone X ၏ပုံတူမုဒ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အက်ပဲလ်ဟာသူ့ရဲ့ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကို YouTube ရုပ်သံလိုင်းမှာတင်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ iPhone X ရဲ့ပုံတူမုဒ်ကကမ်းလှမ်းထားတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တယ်
Noa N10, နောက်ထပ်တရုတ်စမတ်ဖုန်း
Face ID ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ထင်သလား။ TrendForce ကတိုးတက်မှုအတွက်နေရာများစွာရှိနေသေးသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
TrendForce နည်းပညာကုမ္ပဏီသည် Apple ၏ Face ID သိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိကြောင်းသတိပေးသည့်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘယ်မျက်နှာပြင်က iPhone X ဒါမှမဟုတ် Samsung Galaxy Note 8 ကိုမီးမွှေးပေးသလဲ။
များစွာသောအိုင်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ် မူတည်၍ အင်တာနက်ပေါ်တွင်စတင်နေသောသီအိုရီများမှာ ...
LG သည်လာမည့် iPhone X Plus ၏ OLED မျက်နှာပြင်ကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်
၂၀၁၈ သည် iPhone X Plus အသစ်၏နှစ်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးက LG သည်လာမည့် Apple Plus ၏ကြီးမားသော OLED မျက်နှာပြင်ကိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအရာခပ်သိမ်းကညွှန်ပြနေပုံရသည်။
Satechi သည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အလူမီနီယံကဲ့သို့သောပထမတန်းစားပစ္စည်းများဖြင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ကိုပေးထားသည် ၎င်းသည် iPhone X, 8 နှင့် 8 Plus တို့၏လျင်မြန်သောအားသွင်းမှုနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် iPhone X အနည်းငယ်စျေးနှုန်းချိုသာသလော။
မဟုတ်ပါ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်မနေ့ကဖတ်နိုင်သည့်ပြက်လုံးတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ကစားနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည် ...
iPhone X ကသင့်ကိုမျက်မြင်မရတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်
iPhone X ကသင့်ကိုမမြင်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောရင်မင်းဘယ်လိုထင်မလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကဂျပန်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဗွီဒီယိုထဲမှာပြတယ်
iPhone X အသစ်၏မျက်နှာပြင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူနောက်ခံပုံများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပြီး iPhone X အသစ်၏မျက်နှာပြင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Blueprints ၏နောက်ခံပုံအချို့နှင့်သင်၏ iPhone X အသစ်ကိုပြသပါ။
Face ID မှတစ်ဆင့်သင့်ကလေး၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုသင်ခွင့်မပြုပါ
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်သည် iPhone X ကိုသုံးပြီးကတည်းကနားလည်သဘောပေါက်ထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ...
အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း၏အကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှုစနစ် Galaxy S8 တွင်ရှိသည်
စမတ်ဖုန်းတွင်အကောင်းဆုံးသောတည်ငြိမ်သောတည်ငြိမ်မှုစနစ်ကို Galaxy Note 8 တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်
iPhone X သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ပြောင်းလဲမှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးလိမ့်မည်
iPhone X အသစ်သည်လူအများစုက၎င်းတို့၏ iPhone ဟောင်းကိုအချိန်မတိုင်မီ update လုပ်ခြင်းအတွက်အပြစ်တင်မိနိုင်သည်။
iPhone X အသစ်နှင့်အတူလအနည်းငယ်အကြာတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းမှာထည့်သွင်းထားသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
အချို့သောနိုင်ငံများတွင် iPhone X တင်ပို့မှုသည်ဆက်လက်ကျဆင်းနေသည်
iPhone X သည်အချို့သောနိုင်ငံများသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်တိုင်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်ပေးပို့သည့်ကာလကိုလျှော့ချပေးသည်။
2018 ခုနှစ်၏ iPhone X သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပိုရလိမ့်မည်။
iPhone X 2018 တွင်ဘက်ထရီပိုမိုများပြားမည်ဟုနောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရသိရသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုအကျိုးရှိစေမည့်ဘက်ထရီဒီဇိုင်းသစ်ကို Apple ကလုပ်လိမ့်မည်
iPhone X ကိုအမေရိကန်တွင် SIM နှင့်မပါဘဲအခမဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
US မှာဆိုရင်ဥရောပမှာငါတို့လုပ်သလိုပစ္စည်းတွေကိုမ ၀ ယ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကလုံးဝအခမဲ့ပါ။
Google X က iPhone X ကိုထောက်ပံ့ရန် Gmail အက်ပလီကေးရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်သည်
Google မှယောက်ျားလေးများသည်နောက်ဆုံးပေါ် IMAP အကောင့်များအတွက်အထောက်အပံ့ဖြည့်စွက်ခြင်းအပြင် iPhone X မျက်နှာပြင်အသစ်ကိုထောက်ပံ့ရန် Gmail အက်ပလီကေးရှင်းကိုနောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။
iPhone X ကိုတင်ပို့သည့်ကာလသည် ၅ ရက်အထိကျဆင်းသည်
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ iPhone X အသစ်ကို ၀ ယ်ချင်တဲ့သုံးစွဲသူအားလုံးမှာအဲဒီထဲမှာရှိနေပြီလို့ထင်ရပါတယ်။
Google X က iPhone X နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Google Maps ကို update လုပ်တယ်
Google မှယောက်ျားများသည် iPhone X ၏မျက်နှာပြင်ကြီးကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Google Maps app ၏ဒီဇိုင်းကို update လုပ်ကြသည်။
iPhone X နှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အကောင်းဆုံး application များ
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်းသည်သင့်ကိုပြသသည်
iPhone X ၏ Face ID ကိုကျော်လွှားရန်သူတို့ကမျက်နှာဖုံးအသစ်တစ်ခုလုပ်သည်
ထို့အပြင်အချို့သူများက iPhone X Face ID sensor အသစ်၏လုံခြုံရေးသည်ရိုးရှင်းသည်ဟုဆုံးဖြတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Apple က Face ID နှင့် animojis တို့ဖြင့်ကြော်ငြာအသစ် ၄ မျိုးကိုဇာတ်ကောင်များအဖြစ်ထုတ်လွှင့်သည်
အက်ပဲလ်ဟာ iPhone X နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗွီဒီယိုအသစ် ၄ ခု၊ အထူးသဖြင့် Face ID နဲ့၎င်းရဲ့လည်ပတ်မှုကွဲပြားခြားနားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။
iPhone X အတွက်အဆင်သင့်ရှိသော Apple Wallpapers များအားကူးယူပါ
iPhone X ၏ဖန်သားပြင်အသစ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော iOS ဗားရှင်းအဟောင်းများ၏ဒဏ္icalာရီပုံပြင်များကိုရယူပါ။
Oppo R13, တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများက iPhone X ကိုလိုချင်ကြသည်
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများသည်သူတို့၏စမတ်ဖုန်းအသစ်များအတွက် iPhone X ၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကိုစပြီးရည်ညွှန်းပြောဆိုနေကြသည်။
iPhone X ကင်မရာသည်အလင်းကောင်းရန်အတွက်အလင်းနည်းနည်းလိုအပ်သည်
ကင်မရာရှိစမ်းသပ်မှုများကို iPhone များ၌ပြုလုပ်ပြီးမည်သည့်အရာမျှမလွတ်နိုင်ပါ။
iPhone X ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၃ ခုတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်
နောက်ဆုံးသောအက်ပဲ၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမော်ဒယ်အသစ်ဖြစ်သောတော်လှန်ရေးသမား iPhone X သည်သောကြာနေ့ (၂၄) ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံပေါင်း (၁၃) နိုင်ငံသို့တရားဝင်ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။
IPhone X ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအချိန်သည်ဆက်လက်ကျဆင်းသွားသည်
iPhone X တင်ပို့မှုကြာချိန်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပြီးလက်ရှိတွင်တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်အထိသတ်မှတ်ထားသည်
Face ID သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုရပ်တန့်စေပြီး iPhone ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်နှိုးစက်သံကိုလျှော့ချသည်ကိုသင်သိပါသလား။
၎င်းသည်အသစ်သော၊ အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသော iPhone X ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Portrait Lighting ကို Apple ကန့်သတ်ခြင်း
iPhone x ၏အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုအသစ်များကို အသုံးပြု၍ iPhone ကင်မရာပုံတူမုဒ်ဟောင်းဓါတ်ပုံများကိုမြှင့် တင်၍ မရပါ။
iPhone X ကိုရယူရန် Black Friday တွင် Yoigo ၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရယူပါ
Yoigo က Black သောကြာနေ့မကျင်းပမီရက်အနည်းငယ်အလိုတွင် iPhone X ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထူးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
Samsung X နယ်မြေတွင် iPhone X သည်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်များကို ၃ မိနစ်အတွင်းကုန်သွားသည်
Apple iPhone X မှရရှိသောအောင်မြင်မှုသည်ယာယီမျှသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက iPhone X ကိုကျွန်ုပ်တို့အဆုံးသတ်တော့မည့်နှစ်၏အကောင်းဆုံးတီထွင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ခဲ့သည်။
Apple သည် iPhone မော်ဒယ်လ်များတွင် Animoji အသုံးပြုမှုကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်
ဒီတစ်ပတ်မှာပဲ TrueDepth ကင်မရာရဲ့လည်ပတ်ပုံကိုကွန်ယက်သို့သတင်းပို့ခဲ့သည်။
Totallee မှ iPhone X အတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်များပြသခဲ့သည်
အိုင်ဖုန်း X သည်ကာလီဖိုးနီးယားမှ Totallee မှ၎င်း၏အလွန်ပါးလွှာသောအဖုံးများစုဆောင်းမှုအသစ်များမှဤအမှုများအသစ်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
iPhone X အတွက်တင်ပို့ချိန်ပြန်လည်ကျဆင်းသွားသည်
ယခုတစ်ကြိမ်တွင် iPhone X ပုံစံသစ်၏တင်ပို့ချိန်သည်နောက်တဖန်ကျသွားပြီးဤတစ်ကြိမ်တွင် ...
Face ID ကိုလှောင်ပြောင်သဖြင့် ၁၀ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်သည်သူ့မိခင် iPhone X ကိုသော့ဖွင့်လိုက်သည်
ဒီသတင်းဟာလုံးဝမှန်ကန်ပြီးပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပါ။ မိခင်တစ် ဦး ဟာ ၁၀ နှစ်အရွယ်သားနဲ့အတူမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။
အကယ်၍ သင်သည် developer တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၊ Apple သည် WebKit တွင်ထည့်သွင်းသောဤလှည့်ကွက်များကိုသင်စိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်
iOS 11.2 ၏အသစ်အဆန်းများသည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆက်လက်ပြသနေပုံရသည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းတို့သည် developer များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
သင်၏ iPhone 8, 8 Plus နှင့် X အတွက် Xtorm Freedom သည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းကြိုးမဲ့စနစ်ဖြစ်သည်
Xtorm Freedom သည် Apple ၏ iPhone 8, 8 Plus နှင့် X တို့အတွက် Apple ၏အမြန်နှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ကိုပေးထားသည်
iPhone X ၏အလှအပနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးဆုံးလက္ခဏာများအနက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။
iPhone X ရဲ့တိုးတက်မှုကြောင့် Apple က Samsung ကိုဆုတ်ယုတ်စေပါတယ်
iPhone X ရောင်းချမှုမှရရှိသောတိုးတက်မှုကြောင့် Apple သည် Samsung ကိုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။
ဤအရာသည် iPhone X ၏အသုံးအများဆုံးပြfailနာများဖြစ်သည်
ကျနော်တို့အမှား iPhone X ယူနစ်များတွင်တွေ့ရှိရသောအသုံးအများဆုံးအမှားအယွင်းများနှင့်အမှားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သွားကြသည်။
iPhone X ဟာချမ်းတာကိုမကြိုက်ဘူး၊
အချို့သောသုံးစွဲသူများ၏ iPhone X သည်အပူချိန်နိမ့်ကျသည့်အခါအလုပ်မလုပ်တော့ပဲအက်ပလီကေးရှင်းကိုသတိထားမိပြီးမကြာမီပြုပြင်တော့မည်ဖြစ်သည်
iPhone X တွင် iPhone 8 Plus ထက်စပီကာများပိုမိုကောင်းမွန်သည်
အကယ်၍ မကြာသေးမီအချိန်များက iPhone သည်တစ်စုံတစ်ခုတိုးတက်လာလျှင်၎င်းသည်အသံဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ အနည်းငယ်သာ…
သူတို့သည် Panasonic Lumix GH5 ကင်မရာဖြင့် iPhone X ကင်မရာနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်
iPhone X မော်ဒယ်သစ်၏ကင်မရာသည်အသစ်စက်စက်ကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းမည်မှာသေချာသည်။
အက်ပဲလ်သည်နိုင်ငံအသစ် ၁၄ ခုတွင် iPhone X ရရှိနိုင်မှုကိုကြေငြာလိုက်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်၎င်းကိုရရှိနိုင်သည်။
iPhone X အသစ်၏“ Notch” သည်၎င်းတွင်၎င်း၏အိမ်၌တည်ရှိသောကြောင့်ရှောင်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်သည်မှာသေချာသည်။
iPhone X ကိုယူရို ၃၅၀ လျှော့ချဖို့ Apple ကကုန်ကျတယ်
လေ့လာသုံးသပ်သူများကမူ iPhone X တစ်ခုချင်းစီကိုအနည်းဆုံးယူရို ၁,၁၅၉ ဖြင့်ပြသရန်အတွက် Cupertino ကုမ္မဏီသည်ယူရို ၃၅၀ အောက်သာရှိသည်။
iPhone X နှင့် Galaxy Note 8 ကြားရှိမြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှု
လွန်ခဲ့သောနှစ်လခန့်ကဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် "စစ်မှန်သောအမြန်နှုန်း" စမ်းသပ်မှုကိုတွေ့နိုင်သည်။
Animoji သီးသန့် Messages အက်ပ်တစ်ခုအနေဖြင့်
သင် Apple မှမက်ဆေ့ခ်ျများတွင်လွတ်လပ်စွာကမ်းလှမ်းသော Animoji ကိုအသုံးပြုလိုပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ developer တစ်ယောက်သည် app တစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
iPhone X သည်သမိုင်းတွင်အလွယ်ကူဆုံးချိုးဖောက်နိုင်သော iPhone ဖြစ်သည်
ကြည့်ရသည်မှာ iPhone X နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Cupertino ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်ခဲ့သောအနူးညံ့ဆုံးသော iPhone ကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။
DisplayMate က iPhone X ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
iPhone X သည်မည်သည့်စမတ်ဖုန်းမှမဆိုရရှိသောဓာတ်ပုံ၏အကောင်းဆုံးအမှတ်ကိုရရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နို ၀ င်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ iPhone X မော်ဒယ်သစ်တွေကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Samsung သည် iPhone နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်း၏သီလများကိုဂုဏ်ယူသည်
Samsung မှကိုးရီးယားများကသူတို့၏ YouTube ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပထမဆုံး iPhone မှအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ဘဝကိုပြသသည့်ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုတင်ခဲ့သည်
iFixit က iPhone X ကို ၁၀ ခုအနက်မှ ၆ ခုကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်အောင်ပေးသည်
iFixit မှယောက်ျားလေးများသည် iPhone X ကိုဖြုတ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ပြိုကွဲပါကပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်၎င်း၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်သည်။
iPhone X ကွေးသလား။
ဤဆောင်းပါး၌သင်ပြနေသောဗီဒီယိုတွင် iPhone X ကကွေးနိုင်ရုံသာမကခြစ်ရာများကိုမည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
အက်ပဲလ်ဟာသူ့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာ Apple Store ကနေစုဆောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေပိုပေးပါတယ်
Apple Store Online တွင်မည်သည့်အနီးအနားရှိစတိုးဆိုင်များသည်အလားတူပေးပို့သည့်ရက်စွဲများကိုပေးမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်မည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone X ကိုကောက်ယူနိုင်သည်
Animoji Karaoke သည်အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်သည်
iPhone X စတင်ပြီးသည့်နောက် Animoji သည်စိတ်ကူး။ ရသောသီချင်းတစ်ပုဒ်အားပြန်ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ဗီဒီယိုများ၏ဇာတ်ကောင်များဖြစ်လာသည်
iPhone X အသစ်ကိုအက်ပလီကေးရှင်း၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာပါ
Apple က iPhone X ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုရှင်းပြတဲ့ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုလွှင့်တင်လိုက်တယ်။ ဒါမှဖုန်းရဲ့လည်ပတ်မှုအသစ်ကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။
Apple က iPhone X အတွက် iOS 11.2 ၏ဒုတိယ beta ကိုထုတ်ခဲ့သည်
Apple က iOS 11.2 ၏ဒုတိယ beta ကို iPhone X နှင့်လိုက်ဖက်စွာဖြန့်ချိလိုက်သည်။ သို့မှသာသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ iPhone ဟောင်းမိတ္တူအသစ်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
iPhone X ကိုခေတ်ကြီးတစ်ခုမှတ်သားနိုင်တဲ့ဖုန်းကိုဆန်းစစ်ကြည့်တယ်
ပထမ ဦး ဆုံးယူနစ်များသည်စျေးကွက်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ တယ်လီဖုန်း၏သမိုင်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရည်ရွယ်သည့် terminal X ၏အကောင်းဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
သူတို့ဟာအက်ပဲလ်စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာရောင်းချမယ့်အချိန်မှာသူတို့ဟာ iPhone X ၃၀၀ ကိုခိုးယူကြတယ်
ပါးစပ်ပါးစပ်ဖြင့်လူသုံးယောက်သည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့ပို့ရန်စီစဉ်ထားသော UPS ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မှ iPhone Xs ၃၀၀ ကျော်ခိုးယူခဲ့သည်။
iPhone X ပျက်ပြားခြင်းကဘက်ထရီနှစ်ဆနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်
ဤကိစ္စတွင် iFixit ၏တရားဝင်ပြိုကွဲမှုမဟုတ်ခဲ့သော်လည်းထင်ရှားနေဆဲဖြစ်သည်။ လူတိုင်းလိုပဲ ...
iPhone X ကို ၂၀၁၈ တွင်ဈေးကွက်တင်ရန်စီစဉ်ထားသည်
အက်ပဲလ်ရဲ့ iPhone X အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာသူမမျက်နှာပြင်နဲ့ဒီမော်ဒယ်ကိုစတင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့်တစ်နှစ်လောက်တော့တင်ဆက်ချင်တာပါ။
Yoigo ကြောင့် iPhone X 64 GB 200 ယူရိုသက်သာတယ်
အကယ်၍ iPhone X ကို ၀ ယ်ရန်မဆုံးဖြတ်ပဲ၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတစ်ခုထက်ပိုသောယူရို ၁၀၀၀ ကျော်သောကြောင့်၊ Yoigo ၏ကမ်းလှမ်းချက်သည်သင့်ကိုစိတ်ဆိုးစေသည်။
ကြီးမားတဲ့လိုင်းတွေက iPhone X ကိုပြန်ရောက်သွားပြီ
iPhone X ကိုမကြာမီမဖွင့်ခင်ကမ္ဘာတ ၀ န်းရှိ Apple Stores များ၏ရှေ့တွင်တန်းစီများကိုထပ်မံတွေ့ရသည်
iPhone X တင်ပို့မှုကိုရက်သတ္တပတ် ၃-၄ ပတ်အထိလျှော့ချနိုင်သည်
ဒီ ၅-၆ ပတ်ကြာတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ၊
"Reflection" သည် iPhone X ၏သီးသန့်ဖုန်းမြည်သံ၏အမည်ဖြစ်သည်
ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ Apple က Reflection လို့ခေါ်တဲ့ iPhone X အတွက်သီးသန့် ringtone တစ်ခုထည့်ပြီးပြီ။ ငါတို့ငါတို့ပြမယ်။
iPhone X ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းသည်စစ်မှန်သောနက်ရှိုင်းသော 3D ကင်မရာနောက်ကွယ်တွင်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ
အကုန်အကျသက်သာပြီးအက်ပဲလ်ဟာတခြားအင်္ဂါရပ်တွေကြောင့်ဈေးသက်သာတဲ့ iPhone X ရဲ့ True Depth 3D ကင်မရာကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတယ်။
မူရင်းအိုင်ဖုန်းကိုပထမဆုံးစမ်းသပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သူ Steven Levy က iPhone X အကြောင်းပြောခဲ့သည်
iPhone X ကိုစတင်ရောင်းချတော့မည်ဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည်။ သူတို့အားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်ခုမှာစတီဗင် Levy ကဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ဒီဟာကမော်ဒယ်သစ်ကိုတင်ပြတဲ့အခါငါတို့တစ် ဦး ထက်ပိုမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။
iPhone X မှာ Reachability ရှိတယ်၊ အမူအရာတွေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်တယ်
iPhone X သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အသိပေးချက်များ၏ပါဝင်မှုကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ သင်လည်းသင်လုပ်နိုင်သည်။
ရှိပြီးသားဖြစ်သော်လည်းအနည်းငယ်သာသိရှိထားသော privacy option သည် iPhone X တွင်ပုံမှန်အားဖြင့် activate လုပ်ပြီးမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့၏ notifications များကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
Apple သည် iPhone X ၏ဗီဒီယိုများနှင့်ပုံရိပ်များ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါက်ကြားမှုများကိုငြီးငွေ့နေပြီးဈေးကွက်သို့မရောက်မချင်း activation ကိုပိတ်ဆို့ထားပုံရသည်
လာမည့်နှစ်တွင် iPhone သည် Face X sensor နှင့် iPhone X ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
လာမည့်နှစ်တွင် Face ID မျိုးဆက်သစ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုလေ့လာသုံးသပ်သူ Ming-Chi Kuo ၏အဆိုအရအနည်းဆုံး 2019 အထိစောင့်ရမည်။
iPhone X ၏အစုရှယ်ယာသည်စတိုးဆိုင်များတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်
iPhone X ရဲ့ထုပ်ပိုးမှုကိုကြည့်ပြီးသေတ္တာနှင့်အပြင်နှစ်မျိုးစလုံးကိုစတိုးဆိုင်များမှာကြည့်ရှုနိုင်မည်။
Apple သည်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး အားမီးဖွားစဉ်သမီးက iPhone X ကိုပြသခဲ့သည်
Apple Campus တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် Apple အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ၏သမီးတင်ပြသောဗွီဒီယိုသည်တုန်လှုပ်သွားပြီးအင်ဂျင်နီယာကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်သည်။
Apple က iPhone X ကိုတင်ပို့မည့်နေ့ရက်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေပါတယ်
မနေ့ကနိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်သောကြာနေ့၊ iPhone X ၏ကြိုတင်မှာကြားမှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်နှင့်အခြားအရာများစသည်တို့စတင်ခဲ့သည်။
သင်၏ iPhone အသစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် QI ပါသည့် Dodocool desktop charger
Dodocool desktop charger အသစ်ကို QI နှင့်စမ်းသပ်ပြီး၊ iPhone 8 နှင့် iPhone X တို့တွင်ကြိုးမဲ့အားသွင်းချင်သူတိုင်းအတွက်အားသွင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Belkin သည် Apple Store တွင်ရောင်းရန်ဖန်သားပြင်အကာအကွယ်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်
Apple ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် iPhone X အသစ်ထည့်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ကိုထပ်ထည့်သည် ...
Apple က iPhone Xs ကိုသူတို့မျှော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးပိုတောင်းနေတယ်
iPhone X အသစ်၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ Apple ၏ပထမဆုံးထုတ်ပြန်ချက်သည်တောင်မှအထက်တွင်ရှိသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော iPhone X ကြိုတင်မှာကြားမှုများသည်တင်ပို့မှုသည် ၅ ပတ်မှ ၆ ပတ်အတွင်းဖြစ်သည်
iPhone X မော်ဒယ်သစ်၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသည်ထောင်နှင့်ချီသောသူများအကြားတွင်အဆင့်များစွာဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်မှာသေချာသည်။
iPhone P X ကို Google Pixel2လိုမျိုးလောင်ကျွမ်းသွားမှာလား။
iPhone P X ကို Google Pixel2လိုမျိုးလောင်ကျွမ်းသွားမှာလား။ ဒါဟာအနာဂတ်စားသုံးသူများစတင်မေးမြန်းသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ Dodocool ကြိုးမဲ့ကား charger ကိုစမ်းသပ်ပြီး
Dodocool ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်အသစ်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်၏ iPhone X သို့မဟုတ် iPhone 8 အသစ်ကိုအားသွင်းရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုကိုတင်ပြသည်။
Bloomberg ကို Apple မှတုန့်ပြန်သည်။ Face ID ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုလျော့နည်းသွားသည်ဆိုသည်မှားသည်
Bloomberg ၏ကြီးမားသောစွပ်စွဲချက်များမတိုင်မှီ Apple က၎င်း၏ Face ID ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုလျှော့ချပေးသည်ဟုငြင်းဆိုခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်ခဲ့သည်
Bloomberg မှဖော်ပြချက်အရ Apple သည် Face ID ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုလျှော့ချနေသည်ဟုဆိုထားသည်
တရားဝင်ကြေငြာချက်သည် Apple ကိုယ်တိုင်နှင့်မကိုက်ညီဘဲကုမ္ပဏီမှမှတ်ချက်မပေးချေ။
အက်ပလီကေးရှင်းများမှ iPhone X ပေါ်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများသို့ပြောင်းရန်ဗီဒီယို
ထို့အပြင် Apple ၀ န်ထမ်းအချို့နှင့်သူတို့၏မိသားစုများပြသခြင်းကိုမည်သို့ရပ်တန့်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါ ...
အခုတော့ Apple ကလာပြီ။ သူတို့မှာနို ၀ င်ဘာ ၃ ရက်မှာသူတို့မှာ iPhone X ရှိမယ်လို့ပြောတယ်
အရာအားလုံးဆန့်ကျင်နေသည်နှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများအတွက်ပစ်လွှတ်နေ့ / ကြိုတင်စာရင်းသွင်းအပေါ်ထုတ်ကုန်ရှားပါးမှုခန့်မှန်းတဲ့အခါ ...
Youtuber မှ Brooke Amelia Peterson က Apple Campus အတွင်းမှ iPhone X ကိုပြသည်
Pixel2XL မျက်နှာပြင်သည်ဝေဖန်မှုများကိုခံနေရသည်
Pixel2XL ၏မျက်နှာပြင်သည်မနှစ်သက်သောအချို့ထောင့်မှကြည့်သောအခါအရောင်များနှင့်ပုံပျက်ယွင်းမှုများနှင့်အတူကွဲလွဲချက်များအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
Reddit ဗွီဒီယိုတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့အား White iPhone X ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုပြသပြီးအသေးစိတ်နှင့်ဒီဇိုင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်၎င်း၏ interface ကိုမြင်နိုင်သည်
Angela Ahrendts မှပထမဆုံးအချက်အလက်များအရ Apple ဝန်ထမ်းများသည် iPhone X နှင့်မည်သို့ပြုမူသင့်သည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Apple model အသစ်များထုတ်လုပ်ရန်အဓိကအချက်မှာ iPhone X ကိုရောင်းချတော့မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ သည် iPhone ၏အကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်
၎င်းသည်ယခုနှစ်အတွင်း iPhone ၏ရောင်းအားတွင်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပုံရသော်လည်း ...
ထုတ်လုပ်မှုဆက်လက်များပြားလာသည်နှင့်အမျှ iPhone X ကို Apple Stores သို့ဖြန့်ဝေသည်
iPhone X အသစ်ကိုပထမအကြိမ် Apple Stores သို့စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးမကြာသေးမီရက်များအတွင်းထုတ်လုပ်မှုသိသိသာသာများပြားလာသည်။
iPhone X အသစ်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှောင့်နှေးစေမည့်ပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလဟာလများလည်းမဟုတ်ပါ။
ပထမဆုံး iPhone X ကိုလမ်းမပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေရသည်
ဤပြန်ဆိုချက်များသည် ၆.၄ လက်မ iPhone X Plus ၏ပုံပန်းသဏ္showာန်ကိုပြသည်
အချို့ဒီဇိုင်နာများသည်လာမည့်နှစ်တွင်အလင်းရောင်ကိုမြင်နိုင်မည့် ၆.၄ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် iPhone X ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုပြသသည့်ပြန်ဆိုမှုများပြုလုပ်ကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် iPhone X ကိုပြproblemsနာမရှိဘဲရောင်းချနိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
iPhone X interface အကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်တယ်
iPhone X မျက်နှာပြင်မည်သို့မည်ပုံနှင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာကဲ့သို့သောအချို့သောကဏ္aboutများကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါတယ်။
iPhone X ရဲ့တံဆိပ်အသစ်
iPhone X ၏ ဦး ချိုများသည်ထောက်ခံသူများနှင့်ဝေဖန်သူများနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်မှာ၎င်းတို့သည်ဤနေရာတွင်ရှိနေရန်ဖြစ်သည်
Facebook သည် Face ID သော့ဖွင့်ခြင်းစမ်းသပ်မှုများနှင့်စတင်ခဲ့သည်
iPhone X အသစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာနှင့်ဤစနစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်းပုံစံကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
iPhone X က Samsung ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင် Galaxy S8 ထက်ပိုပြီးပေးလိမ့်မယ်
အက်ပဲလ်ရဲ့ iPhone X ဖန်သားပြင်ကိုသီးသန့်ထုတ်လုပ်ပြီးတစ်ယူနစ်ကိုဒေါ်လာ ၁၁၀ နဲ့ Samsung ကငွေအမြောက်အများရလိမ့်မယ်
Reachability (သို့) Easy reach function သည်ကန ဦး သံသယများရှိနေသော်လည်း iPhone X တွင်ဆက်လက်ရှိနေ ဦး မည်ဟုထင်ရသည်။
iPhone X တွင်ကိုယ်ပိုင်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာရှိပြီးရှိပြီး EPEAT တွင်ရွှေအဆင့်ရရှိသည်
iPhone X model အသစ်မရှိသေးပါ၊ ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါပြီ၊ သို့သော် Cupertino မှယောက်ျားများသည် ...
iPhone X မှာထုတ်လုပ်မှုပြissuesနာတွေဆက်ရှိနေသေးတယ်
iPhone X ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်တကယ့်ပြproblemနာမှာ၎င်းသည်စရိုက်လက္ခဏာပြသည့် 3D အာရုံခံကိရိယာဖြစ်သည်။
Tenaa သည် 3GB RAM နှင့် 2.716mAh iPhone X ဘက်ထရီကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်
iPhone X အသစ်တွင်ကြိုတင်မှာယူမှုများပြုလုပ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်အသုံးပြုသူများစွာနှင့်ဤပုံစံသစ်သည် ...
iPhone 8, 8 Plus နှင့် X တို့မှမြန်သောအားသွင်းနိုင်သည့် Chargers
iPhone အသစ်၏မြန်နှုန်းအားသွင်းနိုင်မှုကို Apple မှ USB-C charger များနှင့်အခြားကောင်းသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ပြုလုပ်၍ ငွေကောင်းကောင်းသက်သာလိမ့်မည်
iPhone X ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုသည်မစတင်သေးပါ
iPhone X မော်ဒယ်သစ်များကို ဦး စွာရယူလိုသူများသည်တိုက်ခိုက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
iPhone 8 နှင့် iPhone X တို့သည် T-Mobile ၏ 600 MHz band နှင့်မကိုက်ညီပါ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ဒီဟာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပါမယ်။
iPhone X ကိုဝယ်ချင်တဲ့အကြောင်းရင်းခုနစ်ခု
သင့်ကို iPhone X ကိုချစ်မြတ်နိုးစေပြီး၎င်းကို ၀ ယ်ယူထားတာကိုအာမခံချက်ထက်ပိုပြီးလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်ုပ်တို့အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
Cupertino မှလူငယ်များသည် iPhone X နှင့် iPhone 8 Plus အသစ်အတွက်သူတို့၏အကောင်းဆုံးအာမခံဖြစ်သော AppleCare + စျေးနှုန်းများကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည်။
အချို့သောလေ့လာသုံးသပ်သူများကပြောကြားသည်မှာရောင်းလိုက်သော iPhone X တစ်ခုစီအတွက် Apple ၏အမြတ်အစွန်းသည်ယခင်မော်ဒယ်များထက်နည်းသည်။
Federighi သည် Face ID နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်
Federighi သည် Face ID အသစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အရေးကြီးသောအယူအဆများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
iPhone 8, 8 Plus နှင့် iPhone X တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောစမတ်ဖုန်းများဖြစ်ပြီး 4k နှုန်းဖြင့် 60 fps နှုန်းဖြင့်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သည်
လက်ရှိဈေးကွက်တွင်4fps ဖြင့် 60k အရည်အသွေးဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောစမတ်ဖုန်းများမှာ iPhone 8, 8 Plus နှင့် iPhone X.
Face ID သည်နေကာမျက်မှန်တပ်ထားသည့်တိုင်အလုပ်လုပ်သည်
အက်ပဲလ်၏ Face ID အသစ်၏မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုအင်္ဂါရပ်သည်ဈေးကွက်ရှိနေကာမျက်မှန်အများစုနှင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
Face ID နည်းပညာသည် iPhone X ကိုလူတစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်သာကန့်သတ်ထားသည်
iPhone X ၏သော့ဖွင့်ခြင်းနည်းပညာသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး တည်းကိုသာမှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီး၊
ဒါက iPhone အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးရဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့မော်ဒယ်တွေနဲ့အတူကျန်ခဲ့တယ်
သင့်အားရရှိနိုင်သည့် iPhone မော်ဒယ်များကိုသူတို့၏ပြသမှုအမျိုးမျိုး၊ အရောင်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုယူရိုဖြင့်ပြသထားသည်
ယခု iPhone Upgrade Program သည် iPhone X ကိုရရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ဟောင်းကိုစာဖြင့်ပို့ပေးသည်
iPhone Upgrade Program ကိုကျွန်ုပ်တို့ iPhone ဟောင်းကိုစာပို့ခြင်းဖြင့် iPhone X အသစ်ရရှိရန်လွယ်ကူစေသည်။
သော့ချက်ကျပြီးနောက်နာရီပိုင်းအကြာတွင်အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏ YouTube အကောင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှဗီဒီယိုအားလုံးကိုတင်ခဲ့သည်။
Podcast9× 02: iPhone X ၏တင်ဆက်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Apple မှနောက်ဆုံးပေါ် Keynote တွင်တင်ပြခဲ့သည့်သတင်းများဖြစ်သည့် iPhone X၊ iPhone 8 နှင့် 8 Plus, Apple TV 4K နှင့်အခြားအရာများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။
iPhone အသစ်များသည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်အတွက် Qi စံနှုန်းကိုပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်
iPhone အသစ်သည် Qi standard ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိအခြေခံများနှင့်သဟဇာတဖြစ်မည်။ သို့သော်တရားဝင်အခြေစိုက်စခန်းရောက်ရှိရန်အချိန်ယူရမည်
iOS 11 တွင် iPhone X ၏ OLED မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးမ ၀ င်စေရန်တားဆီးပေးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုပါရှိသည်။
iPhone X အတွက် iOS 11 ဗားရှင်းသည် OLED မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး terminal သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖန်သားပြင်ကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုတားဆီးမည့်စနစ်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
iPhone X ၏တင်ဆက်မှုအဓိကဖော်ပြချက်ကိုကြည့်ရှုရန်
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာကျင်းပမယ့် iPhone X အသစ်ကိုတွေ့ရမယ့်အဓိကအဖြစ်အပျက်ကိုသင်လုပ်နိုင်မယ့်ရွေးချယ်စရာတွေအားလုံးကိုပြသပါတယ်
ဓာတ်ပုံအချို့က Apple Park ကိုလာရောက်လည်ပတ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုပြသည်
မည်သည့် Apple နောက်လိုက်မဆိုလက်လွတ်မခံလို။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သော်လည်းထိုအချိန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
iPhone 8 နှင့် iPhone X အသစ်တို့သည်လက်ရှိ iPhone7၏ RAM ကိုဆက်လက်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်
iOS 11 ကုဒ်သည် iPhone 8၊ iPhone 8 Plus နှင့်၎င်းတို့၏ RAM၊ ကင်မရာနှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကဲ့သို့ hardware အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆက်လက်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
iPhone X ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုမတွေ့ရသေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပေါက်ကြားခဲ့သမျှအများဆုံးသောတင်ပြချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် iPhone X နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးကိုမတွေ့ရသေးပါ
Apple Keynote ဘယ်အချိန်လဲ အားလုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအချိန်ဇယား
ကျနော်တို့က 19:00 pm တွင်စပိန်အချိန်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပေမယ့် ... ထိုအခမ်းအနားကိုအခြားနိုင်ငံများမှာဖြစ်လိမ့်မည်ကြောင်းငါတို့ဖုံးလွှမ်းသွားမယ့်ကြောင်းကြော်ငြာ nauseam ဖတ်ပါလိမ့်မယ်
လေ့လာဆန်းစစ်သူ Ming-Chi Kuo ၏နောက်ဆုံးပေါက်ကြားမှုများအရအိုင်ဖုန်းအသစ်အားလုံးတွင်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ရှိမည်ဟုထင်ရသည်။
Face ID ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံနှင့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
iPhone X ရဲ့တင်ဆက်မှုကနေ ၄၈ နာရီအဝေးမှာရှိနေပြီး iPhone 48 လို့လည်းလူသိများပါတယ်။
ပြEနာများစွာကြောင့် iPhone Edition ထုတ်လုပ်မှုနှောင့်နှေးနိုင်သည်
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရှိအမှားအယွင်းများစွာက iPhone Edition ကိုတစ်လနှောင်းပိုင်းတွင်စတိုးဆိုင်များသို့ရောက်သွားစေနိုင်သည်။
iPhone X, iPhone 8 နှင့် iPhone 8 Plus တို့သည်ထုတ်ကုန်အသစ်များ၏အမည်များဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးသိရတာကတော့ iPhone X, iPhone 8 နဲ့ iPhone 8 Plus တို့ဟာ ၁၂ ရက်မြောက်မှာရောက်လာမယ့်ထုတ်ကုန်အသစ်များ၏အမည်များဖြစ်နိုင်သည်။
iOS 11 က animated emoji ကိုသင့်ရဲ့ facion expression ပေါ်မူတည်ပြီးပို့လိမ့်မယ်
iPhone 8 သည်ကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုရှေ့ကင်မရာရိုက်ကူးသည့်ပုံရိပ်ကိုထင်ဟပ်ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
iOS 8 GM ၌သီးသန့် iPhone 11 wallpapers အသစ်များပေါ်လာသည်
iOS 11 က iPhone နှင့် iPad အတွက်နောက်ခံပုံအသစ်များချန်ထားခဲ့ပြီးဒီဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ပြသထားတဲ့မူရင်းဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်
ပုံတူ mode အသစ်၊ True Tone display နှင့် iOS 11 GM တွင်ပိုမိုထင်ရှားသည်
iOS 11 GM သည်စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်လာမည့်အင်္ဂါနေ့တွင်တင်ဆက်မည့် iPhone 8 နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
iPhone News မှာတင်ထားတဲ့ iPhone 8 ကိုတင်ဆက်ပါ
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် iPhone 12 ၏တင်ဆက်မှုနှင့်အက်ပဲလ်၏အထူးပွဲစဉ်တွင်ပြသထားသောသတင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်မှာ iPhone 15 ကိုကြိုတင်မှာယူထားနိုင်ပါတယ်
ကောလဟာလများစွာအရ iPhone 8 အတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ကာလကိုဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ရက်သည်စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်ဖြစ်သည်
အဖြစ်မှန်က iPhone7ကိုထုတ်ဝေတာကိုဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်မျှော်လင့်မထားဘူးလို့ယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမယ့် Apple ကတင်ပြလိမ့်မယ်။
အက်ပဲလ်က LG သည် 2019 ခုနှစ်တွင် OLED panel များကိုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်
Samsung မှထုတ်လုပ်သော OLED panel များသည် Apple ၏လက်ရှိ LCD panel များထက်နှစ်ဆပိုမိုကုန်ကျမည်ဖြစ်ရာ LG နှင့်ညှိနှိုင်းရန်စတင်ခဲ့သည်။
ARKit တွင်ကြီးမားသောအလားအလာရှိပြီး MeasureKit သည်ဤ iOS 11 အင်္ဂါရပ်အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသုံးချနိုင်မည့်ကြီးမားသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
iPhone 8 သည်ယခင် terminal များနှင့်မည်သို့ကွာခြားသင့်သနည်း။ ဒီပုံတွေကိုကြည့်ရအောင်။
လေ့လာသုံးသပ်သူများက Keynote အပြီးခြောက်ရက်အကြာတွင် Touch ID ကိုနုတ်ဆက်ကြသည်
လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏မှတ်ချက်ပေးချက်အရနောက်ဆုံးပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ iPhone 8 သည် Apple အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောဤနည်းပညာကိုနှုတ်ဆက်လိမ့်မည်။
Samsung သည်၎င်း၏ Note 8 ၏မျက်နှာမှတ်သားမှုနှင့်အတူမျက်နှာသာမရ
မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ Apple က၎င်းအားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
home ခလုတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းက Siri ကိုဖန်သားပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းရှိအိပ်စက်ခြင်းခလုတ်မှတစ်ဆင့်သက်ဝင်စေလိမ့်မည်။
iPhone ရဲ့စျေးနှုန်းကိုတွက်ချက်ခြင်း 8
iPhone 8 မှာဘယ်စျေးနှုန်းရှိနိုင်မလဲ။ ကျနော်တို့အကောင်းမြင်ကောလာဟလတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ ၈၉၉၊ ဒါပေမယ့်အဆိုးမြင်ဆုံးဒေါ်လာ ၉၉၉ ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်။
iPhone 8, iPhone 8 Plus နှင့် iPhone Edition တို့က iPhone အသစ်၏အမည်များဖြစ်လိမ့်မည်
ယခုနှစ်တွင် Apple သည်လာမည့် iPhone ၏ nomenclature ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပုံရသည်။ သူတို့သည် iPhone7နှင့် iPhone 7s Plus မဟုတ်ပါ။
အက်ပဲလ်ကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုစက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာအတည်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်။
Barclays မှလေ့လာသုံးသပ်သူများက iPhone 8 ကိုမြှင့်တင်ရန် Apple Music နှင့် iCloud တို့ပါ ၀ င်သည့်အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုရရှိမည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။